FAALLO:-Muqdisho Maxaa Ka Maqan? W/Q. Ibraahim Aadan Shire | Saadaal Media
FAALLO:-Muqdisho Maxaa Ka Maqan? W/Q. Ibraahim Aadan Shire
Jan 22, 2018 - 2 Jawaabood
Caasimaddu waa wajiga waddankeeda marar badanna waxay qaadataa magaca waddankeeda. Tusaale, waxaad maqli war tabiye leh “isfahamwaaga ka dhaxeeyo Muqdisho iyo Nayroobi…”. Halkaan dalalki Soomaaliya iyo Kenya waxaa matalayo Muqdisho iyo Nayroobi. Marnaba ma dhici karto inay matalaan Boosaaso iyo Mombaasa. Ree Iglaan taas ayay fahamsan yihiin una doorteen in Weelish maamulkiisa la gooni noqdo koodana kula daarto.
Haddaba reer Muqdisho maxay ooga cararayaan ahaanshaha hoggaanka Soomaaliyeed oogana door bidayaan inay noqdaan xaafad beel u oodan illeen maamul goboleed waa un beele?
@Ibrahim Aden Shire
Dooddaadu dhinac ayey gar ka tahey laakiin saaxiib dhimacyo kale oo dhinaca dhaqaalaha aan ka muhimad yareyn ayaad ka ilduuftey.
Waxaa ugu muhimsan arrimahaas
1. Ineysan laheyn dadka deggan matalaad siyaasi oo aysan iyagu madaxdooda doorane loo magacaabo ninkii la doono ee maka jirtaa Londonta aad tusaalaha usoo qaadatey sidaasi mise mayor ka London awood badan oo siyaasadeed ayuu leeyahey?
2. Waxaad kaloo ka booddey in federaalka ka jira Somaliya uu yahey federaal qabiil oo dadka majorityga oo deggan Muqdisho oo canshuurteeda bixiya ay isku qabiil yihiin qabiilka deggan labada maamul ee Hirshabelle iyo Galmudug oo aan lageyn deked iyo airport aan ka aheyn kan Muqdisho sidaas darteed dadkoodi soo buuxiyeen Muqdisho sidaasns waxaa dhaceysa haddii Muqdisho dowladdu u tashato siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba iney si ba,an ugu dulmanaadaan beel ahaan.
Waxaa kaloo jira ineysan dowladdu dhab ahaanba u xakumin cid aan Hawiye aheyn maaddaama Hawiye madaxoodi iyo maalkoodi iyo aqlabiyaddoodi shacabkoodi Muqdisho degganyihiin waxaa ku amar ku taagleyn kara ninkii Muqdisho xakuma. Sidaas darteed Hawiye si ficliya ayuu kaligiis noqonayaa mid dowladda dhexe u taliso iyadoo dowladdii dhexena ay u sarreynayaan inta badan dad ama gobollo kale ka yimid amaba u nugul cadaadiska iyo cad goosiga gobollada madaxa bannaan. Dowladdu dheg jalaq uma siineyso qeylada gobollada aan laheyn awoodda madax bannaani ee ay heystaan gobollada kale.
Tan ugu adag waa in nin qabiilkiisu heysto maamul madax bannaan uu ku amar ku taagleeyo masiirka qabiilka caasimaddu u tahey saldhigga isagoon xataa qabiilkiisina wax u yeerin karin.
Ee arrintaas sidaas u cad maxaad ka leedahey?
Qoraagu waa mahadsanyahay wuxuuna wax ku cabiray sida saxa ah ee dadka wax garanaya ama wax la fahmi karo oo cilmi ku dhisan u fekerayaan, laakiin taas ma taalo meesha bal u fiirso jawaabta uu kuu qoray kii ugu horeeyay ee maqaalka faallo ka bixiya wuxuu ka hadlayaa reer hebel baa heysta iyo reer hebel ayaa waxooda lala wadaagayaa, marka caqligiisa ha lagula hadlo maadama uu ku xiran yahay reer hebel waxaad weydiisaa reerka sheeganaya muqdisho ma deganayeen mise wey ku habsadeen magaalada aaway dadkii 1 milyan iyo barka ahaa ee ku noolaa oo hantida iyo nolosha ku lahaa inta reer hebel aysan ku habsan waxa oo dhan waxaad ku soo koobtaa runta meesha taala reer ayaa hanti xaaraan ah oo dadkeedii lahaa qaarna dilay qaarna qaxiyey dadkaas oo soomaali dhan ku dhameyd reerkii sidaa sameeyay ayaa raba in loo xalaaleeyo dhiigii iyo xaaraantii ay sameeyaan taasina cid soomalida kale ah oo ka yeeleysa ma jirto, ama magaalo reer leeyahay oo xaaraan ay ku qabsadeen oo ku heystaan ayay noqon ama caasimad dadkii soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyay xaqoodii ay ka helaan oo dadkii dhibaatada geystay ay ka toobad keenaan cafisna dalbadaan xaqii muslimka ahaa ay ku galeen oo soomali u simantahay ayay noqon wax u dhaxeyn kara intaa ma jiraan mana jiri doonaan soomaalina wey is wada ogtahay dadka reer muqdisho ku hayo wey is ogyihiin soomalina wey ogtahay xaaraan marnaba xalaal noqon meyso cid sharciyeen kartaana ma jirto waana taas waxa dawlad kasta aysan u yeeli karin in ay dad meel ku habsaday u xukmiso. dalkii soomaaliyada xorta ahaa meel hanti qof ama qaran leeyahay xoog lagu heysto waa Muqdisho cidii is yeelyeeleysa ama iska indha tireysa iyadeey jirtaa oo riyo been ah isu sheegta laakiin xaqiiqdu meesheeda ayeey taal mar walba xaqquna ciyaar kuma suulo.